Hupenyu hausi hwekumirira kuti dutu ripfuure. Izvo ndezvekudzidza kutamba mumvura. - Vivian Greene - Anodzokorora Pedia
Hupenyu hausi hwekumirira kuti dutu ripfuure. Izvo ndezvekudzidza kutamba mumvura. - Vivian Greene
Hupenyu hausi hwekumirira kuti dutu ripfuure, asi ndoda kudzidza kudzidza kutamba mumvura, ingori fananidzo kuratidza kuti Hupenyu haufambe nguva dzose.
Iwe uchafanirwa kusangana nezvakawanda zvipingamupinyi pasi pemutsara, uye zvirokwazvo hapana nzira yekuti iwe uzokwanisa kutiza kwavari chero mukana. Iwe haugone kuramba wakamirira kuti dutu ripfuure; asi iwe uchafanirwa kutanga kudzidza nezve nzira yekutamba uchinaya.
Muhupenyu, iwe zvechokwadi uchasangana nezvakawanda zvezvipingamupinyi, asi haufanirwe kumbovhunduka izvo zvipinganidzo uye kusarudza kumira ipapo.
Iwe haufanirwe kunge wakamirira nguva yakaoma kuti ipfuure, zvese uri wega. Panzvimbo iyoyo, iwe unofanirwa kunge uri rudzi rwemunhu anochengeta zvese zvinokwanisa kutamba kunyange kana kuchinaya.
Rangarira kuti chimwe nechimwe uye chipingamupinyi chakagadzirirwa kukupa iwe zvidzidzo zvikuru zvehupenyu hwako.
Iwe haufanirwe kunge wakamirira kuti matambudziko apfuure, asi iwe unofanirwa kutora humwe kana humwe hunyanzvi kuitira kuti iwe ugone kurwisa kuoma kweiyo nguva yakaoma, uye zvidzidze wega kukurira.
Ziva kuti hapana nguva yakaoma inosara. Izvo zvese nezve maonero ako zvine basa! Nekudaro, iwe unofanirwa kugara uine mafungiro ekurwisa nguva dzese dzakaoma uye uite zvakanaka muhupenyu hwako, zvekuti unokunda ese, uye uve nenguva yakanaka pakupera kwezuva.
Imwe neimwe uye chimwe chipinganidzo chinokupa zvidzidzo zvehupenyu, uye chete kana iwe uchiita izvo zvekudzidza izvo iwe ramba uchikura kuburikidza nemakore kuuya.
Chirevo Pamusoro pekudzidza
Quotes About Kugara Uye Kumirira
Mvura Cloud Quotes
Pfupi Dhanzi Quotes
Chipiri Motivational Quotes
Kumirira Mazuva Akanaka Quotes